शीर ठाडो गरेर हिड्न सक्ने भयौं -विकेश कुथु - Sitemap
Loading... शीर ठाडो गरेर हिड्न सक्ने भयौं -विकेश कुथु
यो भन्दा पहिला पनि हामीले बंगबन्धुमा मल्दिभ्सलाइ हराई सकेका थियौ । हामीले यो सेमिफाइनललाई नै फाइनल मानेर खेलौं भनेर पहिले नै एक खालको तयारी गरेका थियौं । कोचले पनि हामीलाई यस्तै सलाह दिनुभयो । सेमी फाइनलबाट जब फाइनलमा पुग्दाको खुशी कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ?
यो क्षणको खुशीको त सीमा नै छैन । इंडियासंग फाइनलमा पुग्दा यस्तो जोस आयो कि इंडियाले हम्रो देशलाइ यस्तो संकटमा पुर्यायो तै पनि हामीले सकारात्मक सोच राखेर नै मैदानमा राम्रोसंग खेल्यौं । जब फाइनलमा जीत निस्कियो, नेपाली दर्शकहरु रु कमै थिए , मैदानमा कस्तो लाग्यो त्यो बेला ?
सर्बप्रथम त भारतलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराउन पाउनु महत्वपुर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । यसै कारण पनि हामी शीर ठाडो गरेर हिड्न सक्यौं । भारतले गरेको नाकाबन्दीको दबाब गोल हानेर फिर्ता गरियो भन्दा फरक नपर्ला त ?